Tenisy – «Open d’Australile» : norombahin’i Djoko fanineniny ny amboara | NewsMada
Tenisy – «Open d’Australile» : norombahin’i Djoko fanineniny ny amboara
Lasan’ilay Serba, Novak Djokovic, fanineniny, ny «Open d’Australie», eo amin’ny taranja tenisy, sokajy lehilahy. Resiny teo amin’ny famaranana ilay Britanika, Andy Murray. Fihaonana izay notanterahina tao Melbourne, omaly alahady. Tsy niady ny fihaonana na nanao izay faraheriny aza i Andy Murray, satria tamin’ny seta 3 noho 0 (6/1 ; 7/5 ; 7/6) no nisarahan’izy mirahalahy. 2 ora 52 mn ny faharetan’ny lalaon’ny roa tonta, tamin’ity.
Noporofoin’i Djoko, indray ny maha laharana voalohany azy eran-tany, eo amin’ity filalaovana tenisy ity. Tsy naharitra afa-tsy 30 mn monja mantsy ny nakany ny seta voalohany. Nanaitra ny hambom-pon’i Andy izany ka niezaka avy eo ny tovolahy, ka niady tanteraka ny seta 2 farany. Nifanenjehana hatrany ireo “jeux”, tao anatin’izany seta izany. Nisy mihitsy ny fotoana saika nahazoan’i Andy Murray ny seta, saingy tsy nahafahany nahazo izany teo amin’ny traikefa ananan’i Djoko.
Tsy mbola afa-bela tamin’i Djoko mihitsy aloha, hatreto, i Andy Murray, izay efa inefatra nifandona teo amin’ny famaranana ny “Open d’Australie”. Fandresena faha-11, eo amin’ny fifaninanana “Grand chelem” kosa ity norombahin’i Novak Djokovic ity.